Matrix, yakasununguka yekutaurirana chikuva | Linux Vakapindwa muropa
Matrix, inzvimbo yekuronga kutaurirana kwakatemerwa, iyo inogadziridzwa seprojekti iyo inoshandisa yakavhurika zviyero uye inobhadhara kutarisisa kukuru kuona kuchengetedzeka uye kuvanzika kwevashandisi.
Matrix inopa kunyorera-kumagumo kunyorera zvinoenderana neprotocol yayo pachayo, kusanganisira kushandisa iyo Double Ratchet algorithm (chikamu chechiratidzo protocol). Yekupedzisira encryption inoshandiswa mune ese ari maviri mameseji uye makamuri ekutaurirana (uchishandisa Megolm mashini).
Kuitwa kwenzira dzekunyorwa kwakaongororwa nesangano reNCC Group. Sezvo iko kutakura kunoshandisa HTTPS + JSON nekwanisi yekushandisa WebSocket protocol, kana pahwaro hweAPA.
1 Nezve Matrix
1.1 Matrix.org Nheyo
Iyo system iyo inoumbwa senharaunda yemaseva anokwanisa kuyanana pamwe nekuuya pamwe chete mune yakajairika yakatemerwa network.
Iwo mameseji anodzokororwa kumaseva ese kune ivo mameseji evatori vechikamu akabatanidzwa. Meseji dzinogoverwa pakati pemaseva nenzira imwechete iyo yavanogovaniswa pakati peGit repositori.
Muchiitiko chenguva pfupi yekudzima server, mameseji haana kurasikirwa, asi asi anotapuridzirwa kune vashandisi mushure mekunge sevha yatanga kushanda. Mhando dzakasiyana dzemushandisi ID dzinotsigirwa, kusanganisira email, nhamba yefoni, Facebook account, nezvimwe.
Iko hakuna kana imwechete poindi yekutadza kana meseji kutonga pane iyo network. Maseva ese akafukidzwa muhurukuro akafanana.
Chero ani mushandisi anogona kutanga yavo sevha uye kuibatanidza kune yeruzhinji network. Masuwo anogona kugadzirwa kuti Matrix iwirirane nemahurongwa zvichienderana nemamwe maprotocols, semuenzaniso, iwo masevhisi akagadzirirwa iyo bidirectional kutumira mameseji pane IRC, Facebook, Teregiramu, Skype, Hangouts, email, WhatsApp uye Slack.
Pamusoro pekutumira mameseji uye kutaura, iyo sisitimu inogona kushandiswa kuendesa mafaera, kutumira zviziviso, kuronga musangano wemafoni, kuita manzwi uye vhidhiyo mafoni. Matrix inokutendera iwe kuti ushandise risingagumi kutsvaga uye kutarisa kwetsamba nhoroondo.
Iyo zvakare inotsigira epamberi maficha senge kunyora chiziviso, online mushandisi kuvepo kuongorora, kuverenga risiti, kusunda notisi, kuseva-padivi kutsvaga, nhoroondo kuwiriranisa, uye mutengi chinzvimbo.
Kuronga kuvandudza chirongwa, achangogadzirwa iyo isingabatsiri purofiti Matrix.org Nheyo, izvo zvichavimbisa kusununguka kweprojekti, gadzira zviyero zvine chekuita neMatrix uye woita seyakarerekera papuratifomu yekutora sarudzo.
Iyo Matrix.org Foundation inotungamirwa nebhodhi revatungamiriri vashanu vasiri vekutengesa ecosystem avo vanoremekedzwa munharaunda uye vakadanwa kuti vatsigire basa reiyo projekiti.
Vatungamiriri vaisanganisira John Crowcroft (Jon Crowcroft, mumwe wemapiyona ekutaurirana kwakadzika), Matthew Hodgson (Matthew Hodgson, Matrix co-founder), Amandine Le Pape (Amandine Le Pape, Matrix co-founder), Ross Schulman (Ross Schulman, Open Technology Institute gweta rinoshanda muInternet uye masisitimu akaremerwa), Yuta Steiner (Jutta Steiner, mubatsiri-wekambani ye blockchain-based kambani Parity Technologies).
Zvakare zvakare yekutanga yakagadzika vhezheni yeprotocol yakaburitswa Matrix 1.0 uye maraibhurari anoenderana uye kutaurwa.
Mairi iyi vhezheni itsva yeMatrix yakasimbiswa zvizere uye yasvika pakakodzera nyika sehwaro hwekuvandudza kuita kwakazvimirira kwevatengi, maseva, bots uye masuo. Izvo zviitiko zvepurojekiti zvinogoverwa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi.
Nekutadza, Kamuri Protocol 4 inoshandiswa kugadzira nyowani nyowani. Kana uchitama kubva mushanduro dzekare, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kubatanidza kune yakajairwa decentralized network zvino inoda kuwana chitupa cheTLS chinoshanda.
Sevatengi, unogona kushandisa Riot (inowanikwa yeLinux, Windows, MacOS, Webhu, Android, uye iOS), Weechat (CLI muLua), nheko (C ++ / Qt), Quaternion (C ++ / Qt), uye Fractal (Ngura / Gtk).
Basa rinotevera pane inoitwa sevha yakarongedzwa kukwidzirisa mashandiro uye kudzikisa ndangariro kushandiswa. Pamusoro peiyo reva server muPython, kuyedza kwekuitwa kweRuma (Rust) uye Dendrite (Go) kuri kuvandudzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Matrix, yakasununguka yekutaurirana chikuva
Iyo nyowani vhezheni yeMesa 19.1.0 madhiraivha anosvika nerutsigiro rwemamwe makadhi emifananidzo